Isaziso sezomthetho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo Sezulu Senethiwekhi kungokwenethiwekhi yengosi Ibhulogi yezindaba, inkampani ephethwe Amanethiwekhi we-AB Internet 2008 SL, CIF: B85537785, nekheli kwa-C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
kusho ikheli leposi
i-imeyili ukuthintana (at) ibhulogi (iphuzu) com
ifoni (+34) 902 909 238
leli fomu lokuxhumana
Ukuvikelwa kwemininingwane yomuntu
Imininingwane yokuxhumana yomuntu ophethe: Miguel Ángel Gaton nge-imeyili yokuxhumana miguel (at) actualityblog (dot) com
Amalungelo akho okuvikela idatha
Uwasebenzisa kanjani amalungelo akho: Ungathumela ukuxhumana okubhaliwe ehhovisi elibhalisiwe le-AB Internet Networks 2008 SL noma ekhelini le-imeyili eliboniswe esihlokweni salesi saziso somthetho, kufaka phakathi kuzo zombili lezi zithombe ikhophi ye-ID yakho noma omunye umazisi ofanayo, ukucela ukusetshenziswa kwe amalungelo alandelayo:
Ilungelo lokucela ukufinyelela kwimininingwane yomuntu siqu: ungabuza i-AB Internet Networks 2008 SL uma ngabe le nkampani iphatha imininingwane yakho.
Ilungelo lokucela ukulungiswa (uma kwenzeka zingalungile).
Ilungelo lokucela umkhawulo wokwelashwa kwakho, lapho-ke zizogcinwa kuphela yi-AB Internet Networks 2008 SL ukwenza noma ukuvikela izimangalo.
Ilungelo lokwenqaba ukwelashwaI-AB Internet Networks 2008 SL izoyeka ukuphatha imininingwane ngendlela oyishoyo, ngaphandle uma kunesizathu esizwakalayo noma ukusebenzisa noma ukuvikela izimangalo ezingaba khona kumele baqhubeke nokuphatha.
Ukuphatheka kwesokudla kwedatha: uma kwenzeka ufuna idatha yakho icutshungulwe enye inkampani, i-AB Internet Networks 2008 SL izosiza ukuthwala kwemininingwane yakho kumphathi omusha.
Ilungelo lokusula idatha: futhi ngaphandle kokubophezeleka komthetho kuzosuswa ngemuva kokuqinisekiswa kwakho.
Amamodeli, amafomu nolwazi oluthe xaxa ngamalungelo akho: Iwebhusayithi esemthethweni ye-Spanish Agency for Data Protection
Ithuba lokuhoxisa imvume: Uma kwenzeka unikeze imvume nganoma iyiphi injongo ethile, unelungelo lokuyikhipha nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokuthinta ukuba semthethweni kokwelashwa okususelwa kwimvume ngaphambi kokuhoxiswa kwayo.
Ungakhalaza kanjani kwi-Control Authority: Uma ucabanga ukuthi kunenkinga ngendlela i-AB Internet Networks 2008 SL ephatha ngayo idatha yakho, ungabhekisa izimangalo zakho kuMphathi Wezokuphepha we-AB Internet Networks 2008 SL (ekhonjiswe ngenhla) noma ku igunya lokuvikela idatha okuhambelana, kube yi I-ejensi yaseSpain Yokuvikelwa Kwemininingwane, le eboniswe endabeni yeSpain.
Ilungelo lokukhohlwa nokufinyelela kudatha yakho yomuntu siqu
Ngaso sonke isikhathi, uzoba nelungelo lokubuyekeza, ululame, wenze igama lakho lingaziwa futhi / noma ususe, yonke noma ingxenye yayo, imininingwane egcinwe kwiwebhusayithi. Kumele uthumele i-imeyili ku-contacto@actualidadblog.com bese uyicela.
Idatha ehlukanisiwe: Imininingwane ehlukanisiwe izogcinwa ngaphandle kwesikhathi sokususa.
Imininingwane yababhalisile kokuphakelayo nge-imeyili: Kusukela lapho umsebenzisi abhalisela khona aze azikhiphe ohlwini.
Imininingwane yababhalisile kwi-newsletter: Kusukela lapho umsebenzisi abhalisela khona aze azikhiphe ohlwini.
Idatha yomsebenzisi efakwe yi-AB Internet Networks 2008 SL kumakhasi namaphrofayli kumanethiwekhi omphakathi: Kusukela lapho umsebenzisi enikeza imvume yakhe baze bayikhiphe.
Ukuphepha kwemfihlo nedatha
I-AB Internet Networks 2008 SL izinikele ekusetshenzisweni kwedatha, ukuze bahloniphe imfihlo yabo nokuzisebenzisa ngokuhambisana nenhloso yazo, kanye nokuthobela isibopho sabo sokuzigcina futhi zivumelanise zonke izindlela ukugwema ukuguqulwa, ukulahleka, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuhambisana nezinhlinzeko zeRoyal Decree 1720 / 2007 kaDisemba 21, evuma iMithethonqubo yokuthuthukiswa kwe-Organic Law 15/1999 kaDisemba 13, ekuVikeleni Kwemininingwane Yomuntu.
Uqinisekisa ukuthi idatha yomuntu siqu enikezwe ngamafomu iyiqiniso, ubophezelekile ukuxhumana nanoma iluphi ushintsho kubo. Ngokufanayo, uqinisekisa ukuthi yonke imininingwane enikeziwe iyahambelana nesimo sakho sangempela, ukuthi sisesikhathini futhi sinembile.
Ngaphezu kwalokho, kufanele ugcine idatha yakho ivuselelwa ngaso sonke isikhathi, ubhekele kuphela ukunganembi noma ukuqamba amanga kwedatha enikeziwe kanye nomonakalo ongabangelwa yilokhu ku-AB Internet Networks 2008 SL njengomnikazi wale webhusayithi, noma kubantu besithathu ngenxa ye ukusetshenziswa kwethi.
I-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa izindlela zokuphepha ezanele ukuthola ubukhona bama-virus, ukuhlaselwa ngamandla kanye nokujova ngamakhodi.
Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi izindlela zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha kwi-Intanethi azithembeki ngokuphelele nokuthi, ngakho-ke, i-AB Internet Networks 2008 SL ayinakuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izinto ezingadala ushintsho ezinhlelweni zamakhompyutha. (isoftware nehadiwe) yoMsebenzisi noma kumadokhumenti abo kagesi namafayela aqukethwe kuwo.
Ngaphandle kwalokhu, ukuzama kuqinisekisa ukuphepha nobumfihlo bemininingwane yakho yomuntu siqu, iwebsite inohlelo olusebenzayo lokuqapha ezokuphepha olubika ngomsebenzi ngamunye womsebenzisi kanye nokwephula okungenzeka ekuphepheni kwedatha yomsebenzisi.
Uma kutholakala noma yikuphi ukwephulwa, i-AB Internet Networks 2008 SL ithembisa uku yazisa abasebenzisi kungakapheli isikhathi esingamahora angama-72.
Yiluphi ulwazi esiluqoqa kubasebenzisi nokuthi silusebenzisela ini
Yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa kuwebhusayithi zibhekisa kumafomu wokuxhumana, amafomu okuphawula kanye namafomu okwenza ukubhaliswa kwabasebenzisi, ukubhaliswa kwencwadi yezindaba kanye / noma ama-oda wokuthenga.
Le webhusayithi ihlala idinga imvume yangaphambilini yabasebenzisi ukucubungula idatha yabo yomuntu ngezinhloso ezibonisiwe.
Unelungelo lokuhoxisa imvume yakho yangaphambilini nganoma yisiphi isikhathi.
Ukurekhodwa kwemisebenzi yokucubungula idatha
Iwebhu nokusingathwa: Le webhusayithi ine-encryption ye-SSL TLS v.1.2 evumela ukuthunyelwa okuphephile kwedatha yomuntu siqu ngamafomu wokuxhumana ajwayelekile, aphethwe kumaseva i-AB Internet Networks 2008 SL eyenze kusuka kuma-Occentus Networks.
Idatha eqoqwe kuwebhu: Imininingwane yomuntu eqoqiwe izoba ngaphansi kokucutshungulwa okuzenzakalelayo futhi ifakwe kumafayela ahambisanayo aphethwe yi-AB Internet Networks 2008 SL.
Sizothola i-IP yakho, ezosetshenziselwa ukuqinisekisa umsuka womyalezo ukukunikeza imininingwane, ukuvikelwa ekuphawuleni kwe-SPAM nokuthola okungahambi kahle (ngokwesibonelo: amaqembu aphikisanayo ecala elifanayo bhala kuwebhusayithi kusuka kwi-IP efanayo), njengedatha ehlobene ne-ISP yakho.
Ngokufanayo, ungasinikeza ngemininingwane yakho nge-imeyili nangezinye izindlela zokuxhumana eziboniswe esigabeni sokuxhumana.
Ifomu Lempendulo: Kuwebhu kunethuba lokuthi abasebenzisi bashiye imibono ezincwadini zesiza. Kukhona ikhukhi eligcina imininingwane enikezwe ngumsebenzisi ukuze angaphinde ayifake ekuvakasheni okusha ngakunye futhi nekheli le-imeyili, igama, iwebhusayithi nekheli le-IP liqoqwa ngaphakathi. Imininingwane igcinwa kumaseva we-Occentus Networks.
Ukubhaliswa Komsebenzisi: Azivunyelwe ngaphandle kokuthi kucelwe ngokucacile.
Ifomu lokuthenga: Ukufinyelela kumikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa ezitolo zethu eziku-inthanethi, umsebenzisi unefomu lokuthenga ngokuya ngemibandela yenkontileka ebalulwe kunqubomgomo yethu lapho ulwazi lokuxhumana nolokukhokha luzodingeka khona. Imininingwane igcinwa kumaseva we-Occentus Networks.
Siqoqa imininingwane ngawe ngesikhathi senqubo yokuphuma esitolo sethu. Lolu lwazi lungafaka, hhayi lokhu kuphela, igama lakho, ikheli, i-imeyili, ucingo, imininingwane yokukhokha nokunye okudingekayo ukucubungula ama-oda akho.
Ukuphathwa kwale datha kusivumela ukuthi:
Ukuthumela imininingwane ebalulekile mayelana ne-akhawunti yakho / i-oda / isevisi.
Phendula kuzicelo zakho, izikhalazo nezicelo zembuyiselo.
Inqubo yokukhokha futhi ugweme ukuthengiselana okukhohlisayo.
Lungiselela futhi uphathe i-akhawunti yakho, ikunikeze ngezobuchwepheshe namakhasimende, bese uqinisekisa ubuwena.
Ngokwengeziwe, singaqoqa imininingwane elandelayo:
Idatha yendawo neyethrafikhi (kufaka phakathi ikheli le-IP nesiphequluli) uma ufaka i-oda, noma uma sidinga ukulinganisa izindleko zentela nezokuhambisa ngokuya ngendawo yakho.
Amakhasi omkhiqizo avakashelwe nokuqukethwe kubukwa ngenkathi iseshini yakho isebenza.
Ukuphawula kwakho nokubuyekezwa komkhiqizo uma ukhetha ukuwashiya.
Ikheli lokuthumela uma ucela izindleko zokuthumela ngaphambi kokwenza ukuthenga ngenkathi iseshini yakho isebenza.
Amakhukhi abalulekile ukugcina umkhondo wokuqukethwe kwenqola yakho ngenkathi iseshini yakho isebenza.
I-imeyili nephasiwedi ye-akhawunti yakho ukukuvumela ukuthi ufinyelele i-akhawunti yakho, uma unayo.
Uma wenza i-akhawunti, sigcina igama lakho, ikheli nenombolo yocingo, ukuzisebenzisa kuma-oda akho esikhathi esizayo.
Amafomu okubhaliswa kwencwajanaI-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa i-Sendgrid, Feedburner noma i-Mailchimp newsletter service service, egcina imininingwane yakho ye-imeyili, igama nokwamukelwa kokubhalisile. Ungazikhipha ohlwini lwencwadi yezindaba nganoma yisiphi isikhathi ngesixhumanisi esithile esisezansi kwempahla ngayinye oyitholayo
Imeyili: Umhlinzeki wesevisi yethu ye-imeyili u-Sendgrid.
Imiyalezo esheshayo: I-AB Internet Networks 2008 SL ayinikezeli ngesevisi ngemiyalezo esheshayo, njenge-WhatsApp, Facebook Messenger noma i-Line.
Abahlinzeki bezinsizakalo zokukhokha: Ngewebhu, ungafinyelela, ngokusebenzisa izixhumanisi, kumawebhusayithi wezinkampani zangaphandle, njenge PayPal o I-Stripe, ukwenza izinkokhelo ngezinsizakalo ezinikezwa yi-AB Internet Networks 2008 SL. Asikho isikhathi lapho abasebenzi be-AB Internet Networks 2008 SL bekwazi ukufinyelela emininingwaneni yasebhange (isibonelo, inombolo yekhadi lesikweletu) oyinikeza abantu besithathu abashiwo.
Okuqukethwe okushumekiwe kusuka kwamanye amawebhusayithi
Izindatshana kuwebhu zingafaka okuqukethwe okushumekiwe (isb. Amavidiyo, izithombe, izindatshana, njll.). Okuqukethwe okushumekwe kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele enye iwebhusayithi.
Lawa mawebhusayithi angaqoqa idatha emayelana nawe, asebenzise amakhukhi, ashumeke ukulandela ngomkhondo komuntu wesithathu, futhi aqaphe ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okushumekiwe, kufaka phakathi ukulandelela ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okushumekiwe uma une-akhawunti noma uxhumekile kuleyo webhusayithi.
Eminye imisebenzi: Izinsizakalo ezithile ezinikezwa ngewebhusayithi zingaqukatha imibandela ethile enezinhlinzeko ezithile maqondana nokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu. Kubalulekile ukuthi uyifunde futhi uyamukele ngaphambi kokucela insizakalo okukhulunywa ngayo.
Inhloso nokusemthethweni: Inhloso yokucubungula le datha kuzoba ukukunikeza kuphela imininingwane noma amasevisi owacela kithi.
Ubukhona kumanethiwekhi: I-AB Internet Networks 2008 SL inamaphrofayli kwamanye amanethiwekhi amakhulu okuxhumana nabantu kwi-Intanethi.
Inhloso nokusemthethweni: Ukwelashwa okuzokwenziwa yi-AB Internet Networks 2008 SL nemininingwane engaphakathi kwalezi zinethiwekhi ezibalwe ngenhla kuzoba, ikakhulukazi, okuvunyelwa yinethiwekhi yokuxhumana nabantu kumaphrofayili ezinkampani. Ngakho-ke, i-AB Internet Networks 2008 SL ingazisa, lapho umthetho ungakuvimbeli, abalandeli bayo nganoma iyiphi indlela ukuthi inethiwekhi yezokuxhumana ivumela ngemisebenzi yayo, izethulo, okunikezwayo, kanye nokuhlinzeka ngamakhasimende uqobo.
Ukukhishwa kwedatha: Akunasimo i-AB Internet Networks 2008 SL ezokhipha idatha kumanethiwekhi okuxhumana nomphakathi, ngaphandle uma imvume yomsebenzisi itholwe ngqo nangokusobala ukwenza lokho.
Amalungelo: Lapho, ngenxa yemvelo yokuxhumana nabantu, ukusetshenziswa ngempumelelo kwamalungelo wokuvikela idatha womlandeli kuncike ekuguqulweni kwephrofayili yomuntu siqu yalokhu, i-AB Internet Networks 2008 SL izokusiza futhi ikweluleke kuze kube sekugcineni yamathuba ayo.
Amaprosesa angaphandle kwe-EU
I-imeyili. Isevisi ye-imeyili ye-AB Internet Networks 2008 SL inikezwa kusetshenziswa amasevisi we-Sendgrid.
Amanethiwekhi omphakathi. I-AB Internet Networks 2008 SL isebenzisa amanethiwekhi omphakathi aseMelika i-YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, i-Flipboard okwenziwa kuyo ukudluliswa kwedatha okwenziwa kwamanye amazwe, okuhlaziyayo nobuchwepheshe maqondana newebhusayithi ekuseva yayo ukuthi i-AB Internet Networks 2008 SL iphatha imininingwane, esebenzisa bona, abasebenzisi, ababhalisile noma amatilosi abaletha ku-AB Internet Networks 2008 SL noma abelana ngayo nayo.
Abahlinzeki bezinkokhelo. Ukuze ukwazi ukukhokha ngokusebenzisa PayPal o I-Stripe, AB Internet Networks 2008 SL izothumela imininingwane edingekile yalabo kulaba bacubunguli bokukhokha ukuze kukhishwe isicelo sokukhokha esihambelanayo.
Imininingwane yakho ivikelwe ngokwenqubomgomo yethu yobumfihlo namakhukhi. Ngokwenza kusebenze okubhalisile noma ukuhlinzeka ngemininingwane yakho yokukhokha, uyaqonda futhi wamukela inqubomgomo yethu yobumfihlo namakhukhi.
Uzohlala unelungelo lokufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukususwa, ukukhawulelwa, ukuthwala nokukhohlwa idatha yakho.
Kusukela lapho ubhalisa njengomsebenzisi kule webhusayithi, i-AB Internet Networks 2008 SL inokufinyelela ku: Igama lomsebenzisi ne-imeyili, ikheli le-IP, ikheli leposi, i-ID / i-CIF nolwazi lokukhokha.
Kunoma ikuphi, i-AB Internet Networks 2008 SL inelungelo lokuguqula, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, kodwa ukwazisa, ukwethulwa nokulungiswa kwewebhusayithi njengaleso saziso esisemthethweni.
Ukuzibophezela nezibopho nabasebenzisi bethu
Ukutholakala kanye / noma ukusetshenziswa kwale webhusayithi kuchaza noma ngubani owenza isimo somsebenzisi, ukwamukela, kusukela kulo mzuzu, ngokugcwele nangaphandle kokubhuka, lesi saziso somthetho maqondana nezinsizakalo ezithile nokuqukethwe yiwebhusayithi.
Ekusetshenzisweni kwale webhusayithi, umsebenzisi uzibophezela ekungenzeni noma yikuphi ukuziphatha okungalimaza isithombe, izintshisekelo namalungelo we-AB Internet Networks 2008 SL noma abantu besithathu noma okungalimaza, kukhubaze noma kugcwalise ngokweqile ingosi noma kuvimbele , kunoma yikuphi, ukusetshenziswa okuvamile kwewebhu.
Inqubomgomo yethu yobumfihlo ichaza ukuthi siluqoqa kanjani, silugcine noma silusebenzisa kanjani ulwazi esiluqoqayo ngezinsizakalo ezahlukahlukene noma amakhasi atholakala kule sayithi. Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi yiluphi ulwazi esiluqoqayo nokuthi silusebenzisa kanjani njengoba ukufinyelela kuleli sayithi kusho ukwamukelwa kwenqubomgomo yethu yobumfihlo.
Ukuyifinyelela kungabandakanya ukusetshenziswa kwe- amakhukhi. I amakhukhi Amanani amancane wolwazi agcinwe kusiphequluli esisetshenziswa ngumsebenzisi ngamunye ukuze iseva ikhumbule imininingwane ethile engayisebenzisa kamuva. Lolu lwazi lusivumela ukuthi sikukhombe njengomsebenzisi othile futhi likuvumela ukuthi ulondoloze okuthandayo, kanye nemininingwane yezobuchwepheshe njengokuvakasha noma amakhasi athile owavakashelayo.
Labo basebenzisi abangafisi ukuthola amakhukhi noma ufuna ukwaziswa ngaphambi kokuba kugcinwe kwikhompyutha yakho, ungalungiselela isiphequluli sakho ngale njongo.
Iziphequluli eziningi zanamuhla zivumela ukuphathwa kwe- amakhukhi ngezindlela ezi-3 ezihlukile:
I-Las amakhukhi azemukeleki neze.
Isiphequluli sibuza umsebenzisi ukuthi kufanele asamukele ngasinye Ikhukhi.
I-Las amakhukhi amukelwa njalo.
Isiphequluli singafaka futhi ikhono lokucacisa kangcono ukuthi yini amakhukhikufanele yamukelwe futhi okungeyona. Ngokuqondile, umsebenzisi angavama ukwamukela noma iyiphi yalezi zinketho ezilandelayo:
yenqaba i- amakhukhi kwemikhakha ethile;
yenqaba i- amakhukhi kusuka kubantu besithathu;
yamukela amakhukhi njengokungaqhubeki (ziyasuswa lapho isiphequluli sivaliwe);
vumela iseva ukuthi idale amakhukhi Okwesizinda esihlukile.
I-Google, njengomhlinzeki wozakwethu, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso kuwebhu.
Ungakhubaza ukusetshenziswa kwekhukhi ye-DART ohlelweni lwesikhangiso se-Google ngokungena kufayela le- Isikhungo sobumfihlo se-Google.
Ngokwengeziwe, iziphequluli zingavumela abasebenzisi ukuthi babuke futhi basuse amakhukhi ngamunye.
Uneminye imininingwane mayelana Amakhukhi ku: Wikipedia
Leli sayithi nalo lingasingatha ama-beacons ewebhu (obeye aziwe njengo izimbungulu zewebhu). I- ama-beacons ewebhu Imvamisa kuyizithombe ezincane ze-pixel eyodwa ngephikseli eyodwa, ebonakalayo noma engabonakali, efakwe ngaphakathi kwekhodi yomthombo yamakhasi ewebhu wesayithi. I- ama-beacons ewebhu serve futhi asetshenziswa ngendlela efana ne- amakhukhi. Ngaphezu kwalokho, i ama-beacons ewebhu Imvamisa zisetshenziselwa ukukala ithrafikhi yabasebenzisi abavakashela ikhasi lewebhu futhi bakwazi ukuthola iphethini yabasebenzisi besayithi.
Uneminye imininingwane mayelana ama-beacons ewebhu ku: Wikipedia
Kwezinye izimo, sabelana ngolwazi mayelana nabavakashi baleli sayithi ngokungaziwa noma ngokuhlanganiswa nabantu abavela eceleni njengabakhangisi, abaxhasi noma abacwaningi mabhuku ngenhloso eyodwa yokwenza ngcono izinsizakalo zethu. Yonke le misebenzi yokucubungula izolawulwa ngokuya ngemithetho yezomthetho futhi wonke amalungelo akho maqondana nokuvikelwa kwedatha azohlonishwa ngokuya ngemithetho yamanje.
Leli sayithi lilinganisa ithrafikhi ngezixazululo ezahlukahlukene ongazisebenzisa amakhukhi o ama-beacons ewebhu ukuhlaziya okwenzekayo emakhasini ethu. Njengamanje sisebenzisa izixazululo ezilandelayo ukukala ukugcwala kwaleli sayithi. Ungabona imininingwane eminingi mayelana nenqubomgomo yobumfihlo yesisombululo ngasinye esisetshenziselwe le njongo:
I-Google (Izibalo): Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Google Analytics
I-Automattic / i-Quantcast (Izibalo zeJetPack): Inqubomgomo yobumfihlo ye-Automattic y Quantcast.
I-Disqus (uhlelo lokuphawula): Inqubomgomo yobumfihlo ye-Disqus
Leli sayithi lingahle futhi libe nezindawo zalo zokukhangisa, abaxhumana nabo, noma amanethiwekhi wokukhangisa. Lokhu kukhangisa kuboniswa ngamaseva wokukhangisa nawo asebenzisayo amakhukhi ukukhombisa okuqukethwe okuhlobene nokukhangisa kubasebenzisi. Ngayinye yalezi zinhlelo zokukhangisa inenqubomgomo yayo yobumfihlo, engathintwa kumakhasi ayo ewebhu.
I-Las amakhukhi Ungamafayela enziwe kusiphequluli somsebenzisi ukuze aqophe umsebenzi wawo kwiWebhusayithi futhi avumele ukuzulazula okwedlulele nokwenziwe ngezifiso.
Cookie Igama Injongo Ulwazi oluningi
-Google Analytics __utma
__utmz Iqoqa imininingwane engaziwa ekuhambeni kwabasebenzisi ngokusebenzisa iwebhusayithi ukuze yazi imvelaphi yokuvakashelwa neminye imininingwane efanayo yezibalo. Okwamanje asiwasebenzisi lawa makhukhi. - Isikhungo Sobumfihlo se-Google
-I-plugin yokukhetha ukuphuma ye-Google Analytics
I-Google Adsense, Qhafaza kabili, iDART __izigebengu Iqoqa imininingwane mayelana nokuzulazula komsebenzisi ukunikezela ngokukhangisa - Inqubomgomo yobumfihlo ye-Google Adsense
I-Automattic, i-Quantcast ne-Disqus __qta
testCookie Iqoqa imininingwane engaziwa ekuhambeni kwabasebenzisi ngokusebenzisa iwebhusayithi ukuze yazi imvelaphi yokuvakashelwa neminye imininingwane efanayo yezibalo. - Inqubomgomo Yemfihlo ye-Quantcast
Okungeziwe __atuvc Ikhukhi le-__atuvc lisetshenziswa uhlelo lwe-Addthis lokwabelana nomphakathi ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi babona ikhawunta yokwabelana ngokwenhlalo ihlanganiswe ezinkinobho zomphakathi zewebhusayithi ivuselelwe kahle. - Inqubomgomo yobumfihlo ye-Addthis
Ukuze usebenzise le Website akudingekile ukufaka amakhukhi. Umsebenzisi akakwazi ukuwamukela noma amise isiphequluli sakhe ukuze siwavimbe futhi, lapho kufanele khona, awaqede.
Kukhona namakhukhi ahambelana namanethiwekhi omphakathi asetshenziswa yile webhusayithi anezinqubomgomo zawo zamakhukhi.
Ikhukhi le-Twitter, njengoba kuhlinzekiwe ku sakho inqubomgomo yobumfihlo nokusetshenziswa kwamakhukhi.
I-cookie ye-Facebook, njengoba kuhlinzekiwe ku sakho Inqubomgomo yamakhukhi
I-Google + ne-Google Maps cookie, njengoba kunikezwe ekhasini layo mayelana nokuthi yini uhlobo lwamakhukhi asetshenzisiwe
Ikhukhi le-Pinterest, njengoba kuhlinzekelwe kuwe Umgomo wobumfihlo nokusetshenziswa kwamakhukhi
Ikhukhi le-Gravatar, njengoba kunikezwe ku- inqubomgomo yobumfihlo yenkampani i-Automattic.
Njengamanje leli sayithi liphethe izikhangiso ze:
Google AdSense: Inqubomgomo yobumfihlo ye-Google Adsense - Imigomo nemibandela -Izinqubomgomo Zohlelo
I-Adconion: Inqubomgomo yobumfihlo ye-Adconion
I-Google DFP: Inqubomgomo yobumfihlo ye-Google DFP.
Ama-Buysellads: Inqubomgomo yobumfihlo ye-Buysellads - Imigomo nemibandela
I-Taboola: Inqubomgomo yobumfihlo yeTaboola.
Isibopho sezomthetho ngokuqukethwe
Isayithi iqukethe imibhalo elungiselelwe izinjongo ezifundisayo noma ezifundisayo kuphela ezingase zingakhombisi isimo samanje somthetho noma umthetho wezomthetho futhi ezibhekise ezimweni ezijwayelekile, ngakho-ke okuqukethwe kwayo akukwazi ukusetshenziswa ngumsebenzisi ezimweni ezithile.
Imibono evezwe kuzo ayikhombisi neze imibono ye-AB Internet Networks 2008 SL.
Okuqukethwe izindatshana ezishicilelwe kusayithi akunakubhekwa, kunoma yikuphi, esikhundleni sezeluleko zezomthetho.
Umsebenzisi akumele enze ngokusekelwe kolwazi oluqukethwe kusayithi ngaphandle kokuqala asebenzise izeluleko zochwepheshe ezihambisanayo.
Amalungelo empahla yezimboni kanye nezimboni
Ngalezi Zimo Ezijwayelekile, awekho amalungelo empahla yengqondo noma ezimboni adluliselwa engosini noma kunoma yiziphi izinto zayo, ukukhiqizwa kabusha, ukuguqulwa, ukusatshalaliswa, ukuxhumana komphakathi, okwenza kutholakale emphakathini, ukukhipha, ukusebenzisa kabusha, ukuvinjelwa ngokusobala kuMsebenzisi. ukudlulisa noma ukusebenzisa noma iluphi uhlobo, nganoma iyiphi indlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwa ngumnikazi wamalungelo ahambisanayo.
Umsebenzisi uyazi futhi wamukela ukuthi yonke iwebhusayithi, equkethe ngaphandle kohlamvu oluphelele umbhalo, izithombe, imiklamo, isoftware, okuqukethwe (kufaka phakathi ukwakheka, ukukhethwa, ukuhlelwa nokwethulwa okufanayo), izinto ezibukwayo nezithombe, kuvikelwe izimpawu zokuhweba, amalungelo okushicilela namanye amalungelo asemthethweni abhalisiwe, ngokuya ngezivumelwano zamazwe omhlaba lapho iSpain iyiqembu namanye amalungelo empahla nemithetho yaseSpain.
Uma kwenzeka umsebenzisi noma umuntu wesithathu abheka ukuthi kube nokwephulwa kwamalungelo abo asemthethweni okuvikela ubunikazi bokusungula ngenxa yokwethulwa kokuqukethwe okuthile kusayithi, kufanele bazise i-AB Internet Networks 2008 SL ngesimo esishiwoyo, okukhombisa:
Imininingwane yomuntu siqu yenhlangano ethintekayo yamalungelo okusolwa ukuthi yokwephulwa, noma ikhombise umfanekiso enza ngawo icala uma isimangalo sivezwa umuntu wesithathu ngaphandle komuntu onentshisekelo.
Khombisa okuqukethwe okuvikelwe ngamalungelo empahla yokusungula kanye nendawo okuyo kusayithi, ukugunyazwa kwamalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula okukhonjisiwe kanye nesimemezelo esiveza lapho umuntu othintekayo enesibopho sobuqiniso bolwazi olunikezwe esazisweni.
Imithethonqubo kanye nokuxazululwa kwezingxabano
Izimo zamanje zokusetshenziswa kwaleli sayithi zilawulwa ngandlela thize ngomthetho waseSpain. Ulimi lokubhalwa nokuchazwa kwalesi saziso esisemthethweni yiSpanish. Lesi saziso somthetho ngeke sifakwe kumsebenzisi ngamunye kepha sizohlala sitholakala nge-inthanethi kuwebhu.
Abasebenzisi bangathumela oHlelweni Lokulamula Abathengi i-AB Internet Networks 2008 SL ezoba yingxenye yalo ukuxazulula noma yikuphi ukuphikisana noma isimangalo esivela kulo mbhalo noma kunoma yimuphi umsebenzi we-AB Internet Networks 2008 SL, ngaphandle kokuxazulula lezo zingxabano ezidala ukuthuthukiswa umsebenzi odinga ubulungu, lapho umsebenzisi kufanele aye kunhlangano ehambisanayo yenhlangano efanelekile yamabha.
Abasebenzisi abanesimo sabathengi noma sabasebenzisi njengoba kuchazwe yimithetho yaseSpain futhi bahlala e-European Union, uma bebe nenkinga ngokuthengwa oku-inthanethi okwenziwe ku-AB Internet Networks 2008 SL, ukuzama ukufinyelela esivumelwaneni esingaphandle kwenkantolo bangaya uku Ipulatifomu Yokuxazulula Izingxabano E-inthanethi, eyakhiwe yi-European Union futhi yathuthukiswa yi-European Commission ngaphansi kwe Umthethonqubo (EU) 524/2013.
Kuncike ekutheni umsebenzisi akayena umthengi noma umsebenzisi, futhi uma kungekho mthetho ophoqelela okunye, amaqembu avumelana ukuletha eNkantolo naseNkantolo yeMkhandlu yaseMadrid, njengoba lokhu kuyindawo yokuphetha inkontileka, ukuyeka ngokucacile noma yikuphi elinye igunya elingahambisana nabo.
Ukufinyelela kanye / noma ukusetshenziswa kwalokhu kunoma ngubani owenza isimo soMsebenzisi, ukwamukela, kusukela kulesi sikhathi, ngokugcwele nangaphandle kokubhuka, lesi saziso somthetho, kanye nemibandela ethile, lapho kufanele khona, iyayigcwalisa, ubudlelwane nezinsizakalo ezithile nokuqukethwe kwengosi.
Umsebenzisi uyaziswa, futhi uyakwamukela, ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezohwebo ne-AB Internet Networks 2008 SL. Ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo nokuqukethwe ngaphandle kokuphula umthetho wamanje, ukuthembeka nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinhloso ezingekho emthethweni noma eziyingozi, noma lokho, nganoma iyiphi indlela, kungadala ukulimala noma kuphazamise ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi akuvunyelwe. Mayelana nokuqukethwe yile webhusayithi, akuvunyelwe:
Ukuphinda kukhiqizwe, ukusatshalaliswa noma ukuguqulwa kwaso, kuphelele noma ingxenye, ngaphandle kokuthi kugunyazwe ngabanikazi baso abafanele.
Noma yikuphi ukwephulwa kwamalungelo omhlinzeki noma abanikazi abafanele.
Ukusetshenziswa kwayo ngezinjongo zokuthengisa noma zokukhangisa.
Amakhasi ewebhusayithi ahlinzeka izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi nokuqukethwe okungokwabantu besithathu, abakhiqizi noma abahlinzeki.
Inhloso yodwa yezixhumanisi ukuhlinzeka uMsebenzisi ngamathuba okufinyelela izixhumanisi ezishiwo nokwazi imikhiqizo yethu, yize i-AB Internet Networks 2008 SL ingenacala kunoma yimiphi imiphumela engahle itholakale kumsebenzisi ngokufinyelela izixhumanisi ezishiwo.
Umsebenzisi ohlose ukusungula noma iyiphi idivayisi yokuxhumanisa ezobuchwepheshe kusuka kuwebhusayithi yakhe iye engosini kumele athole imvume ebhaliwe ngaphambilini yeAB Internet Networks 2008 SL.
Ukusungulwa kwesixhumanisi akusho ukuthi kunoma ikuphi ubukhona bobudlelwano phakathi kwe-AB Internet Networks 2008 SL nomnikazi wesayithi lapho isixhumanisi sisungulwe khona, noma ukwamukelwa noma ukuvunywa yi-AB Internet Networks 2008 SL kokuqukethwe noma amasevisi .
Umsebenzi we ukumaketha kabusha noma kwizithameli ezifanayo ze-AdWords zisivumela ukuthi sifinyelele kubantu abake bavakashela iwebhusayithi yethu ngaphambilini futhi sibasize baqedele inqubo yabo yokuthengisa.
Njengomsebenzisi, uma ufaka iwebhusayithi yethu, sizofaka ikhukhi lokumaketha kabusha (kungavela kwaGoogle Adwords, Criteo noma ezinye izinsizakalo ezinikezela ukumaketha kabusha).
Le khukhi igcina imininingwane yezivakashi, njengemikhiqizo abayivakashele noma uma belahla inqola yokuthenga.
Lapho isivakashi sishiya iwebhusayithi yethu, ikhukhi lokumaketha kabusha liyaqhubeka esipheqululini salo.
Eminye imibandela yokusetshenziswa kwale webhusayithi
Umsebenzisi uzibophezela ekusebenziseni i-webhusayithi ngenkuthalo kanye nezinsizakalo ezifinyeleleka kuyo, ngokuhambisana ngokuphelele noMthetho, amasiko amahle kanye nalesi saziso somthetho.
Ngokunjalo, yenza, ngaphandle kwalapho kuqala, ukugunyaza okuzwakalayo nokubhaliwe kwe-AB Internet Networks 2008 SL ukusebenzisa imininingwane equkethwe kuwebhusayithi, kuphela imininingwane yakho, ingakwazi ukwenza ukuxhaphaza ngqo noma ngokungaqondile kokuqukethwe ukufinyelela.
Leli sayithi ligcina ifayela ledatha elihlobene namazwana athunyelwe kule sayithi. Ungasebenzisa amalungelo akho okufinyelela, ukulungisa, ukukhansela noma ukuphikisa ngokuthumela i-imeyili kukheli oxhumana naye (at) actualblog (dot) com.
Le sayithi, izizinda ezihambisanayo nobunikazi bokuqukethwe kungokwakwa-AB Internet Networks 2008 SL.
Le webhusayithi iqukethe ama-hyperlink aholela kwamanye amawebhusayithi aphethwe ngabantu besithathu abangaphandle kwenhlangano yethu. I-AB Internet Networks 2008 SL ayiqinisekisi noma inesibopho sokuqukethwe okuqoqwe kumakhasi e-web ashiwo.
Ngaphandle kokuthi ukugunyazwa okucacile, kwangaphambili nangokubhaliwe kwe-AB Internet Networks 2008 SL, ukukhiqiza kabusha, ngaphandle kokusetshenziswa kwangasese, ukuguqulwa, futhi ngokujwayelekile noma yiluphi olunye uhlobo lokuxhashazwa, nganoma iyiphi inqubo, yakho konke noma ingxenye yokuqukethwe le webhusayithi.
Kuvinjelwe ngokuphelele ukwenza ngaphandle kokukhohlisa noma ukuguqulwa kwale webhusayithi ngaphandle kwemvume yangaphambilini ye-AB Internet Networks 2008 SL. Ngenxa yalokho, i-AB Internet Networks 2008 SL ngeke ithathe noma yimuphi umthwalo otholwayo, noma ongavela, kusuka kulolo shintsho noma ukukhohlisa okwenziwa ngabantu besithathu.
Ukusetshenziswa kwamalungelo e-Arco
Ungavivinya, maqondana nedatha eqoqiwe, amalungelo aqashelwa ku-Organic Law 15/1999, wokufinyelela, ukulungiswa noma ukukhanselwa kwedatha nokuphikiswa. Ngalesi sizathu ngiyakwazisa ukuthi uzokwazi ukusebenzisa la malungelo ngesicelo esibhaliwe nesisayiniwe ongasithumela, kanye nefothokhophi ye-ID yakho noma umazisi ofanayo, ekhelini leposi le-AB Internet Networks 2008 SL noma nge-imeyili, unamathisele ikhophi kamazisi ku: (at) i-actualityblog (ichashazi) com. Ngaphambi kwezinsuku eziyi-10 sizophendula esicelweni sakho sokuqinisekisa ukwenziwa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
Ukukhishwa kweziqinisekiso nesikweletu
I-AB Internet Networks 2008 SL ayinikezi siqinisekiso futhi ayinacala, noma ngabe ikuphi, ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo olungabangelwa:
Ukuntuleka kokutholakala, ukugcinwa kanye nokusebenza okusebenzayo kwewebhusayithi noma izinsizakalo zayo nokuqukethwe;
Ukuba khona kwamagciwane, izinhlelo ezinonya noma eziyingozi kokuqukethwe;
Ukusetshenziswa okungekho emthethweni, budedengu, inkohliso noma okuphambene nalesi Saziso Sezomthetho;
Ukuntuleka kokuba semthethweni, ikhwalithi, ukuthembeka, usizo kanye nokutholakala kwezinsizakalo ezinikezwe abantu besithathu futhi kwenziwa kutholakale kubasebenzisi kuwebhusayithi.
I-AB Internet Networks 2008 SL ayinacala ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ngomonakalo ongavela ngokusetshenziswa ngokungemthetho noma ngokungafanele kwale webhusayithi.
Ipulatifomu yaseYurophu yokuxazulula izingxabano online
I-European Commission ihlinzeka ngenkundla yokuxazulula izingxabano online etholakala kusixhumanisi esilandelayo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Abathengi bazokwazi ukuletha izimangalo zabo ngokusebenzisa ipulatifomu yokuxazulula izingxabano online
Umthetho Osebenzayo Nokubusa
Ngokuvamile, ubudlelwano phakathi kwe-AB Internet Networks 2008 SL nabasebenzisi bezinsizakalo zayo ze-telematic, abakhona kule webhusayithi, bangaphansi komthetho waseSpain namandla.
Sizohlala sitholakala kalula: Ukuxhumana kwethu
Uma kwenzeka noma yimuphi umsebenzisi enanemibuzo ngalezi zimo zomthetho noma noma yikuphi ukuphawula mayelana ne-portal, sicela uye ku- (at) actualityblog (dot) com.
Ukwemukelwa kanye nemvume
Umsebenzisi uthi wazisiwe ngemibandela yokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, ukwamukela nokuvuma ukwelashwa kwayo yi-AB Internet Networks 2008 SL, ngendlela nangezinjongo eziboniswe kule nqubomgomo yobumfihlo.
Ngokuya ngomthetho wamanje, i-AB Internet Networks 2008 SL ayenzi ukwenziwa kwe-SPAM, ngakho-ke ayithumeli ama-imeyili ezentengiso angazange acelwe ngaphambilini noma agunyazwe ngumsebenzisi. Ngenxa yalokho, kwifomu ngalinye kwiwebhu, uMsebenzisi unethuba lokunikeza imvume yakhe yokuthola i-Newsletter / i-bulletin yethu, kungakhathalekile imininingwane yezentengiso ecelwe ngqo.